AFC Ajax Football Diary- Akụkọ gbasara ụmụaka nke oge a na kpochapụla kpakpando
Welcome to our Ajax Football Diary of Childhood Stories Plus Nkọwapụta Ihe Echiche nke ugbu a na gara aga AFC Ajax Football Stars. N'ebe a, anyị emeela ka ndị na-agụ akwụkwọ nwee ike ịme ma ugbu a ma kpochapụla AFC Ajax Football Stars nke kpochapụla ndị mara mma nke egwuregwu.
Obi abụọ adịghị ya na AFC Ajax mere ka football na ndị agbụrụ ya dị mpako. Ndị ọrụ ya ugbu a na ndị kpochapụwo na ha ruru eru ịbụ ndị a na-akpọ Football Diary of Fame.
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Onye na-eti mkpu'. Anyị Christian Eriksen Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-eweta ...
Ihe omuma banyere Andre Onana na-agbagha ozi banyere akụkọ nwata, ndụ mbido, ezinụlọ, nne na nna, Life Life (enyi nwanyị / eziokwu nwunye), ezigbo uru na Ndụ. Anyị ...
Hale Hendrix - Nwere ike 28, 2021 0
Ihe omuma anyi nke Perr Schuurs 'na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ka o buru, ibi ndu, uru di na ndụ nke onwe. Iji ...
Akụkọ ndụ anyị nke Ryan Gravenberch na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ha bụrụ, Ndụ (arsgbọ ala), Net Worth na ...
Hale Hendrix - Nwere ike 23, 2021 0
Anyị Lassina Traore Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ dịrị, Ndụ, Net Net na Ndụ Nke Onwe. Naanị ...
LB na-egosi akụkọ zuru oke nke akụkọ akụkọ bọọlụ aha ya bụ Nickname "Ibracadabra". Anyị Zlatan Ibrahimovic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ ...
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Hunter". Anyị Klaas-Jan Huntelaar Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma.
LB na-egosi Akụkọ nke Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Scholletje Junior". Anyị Daley Blind Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị ...
Hale Hendrix - Nwere ike 14, 2021 1
LB na-egosi Full Story of a Nigerian Football Legend onye kacha mara aha ya; "The gbara Master". Sundaybọchị Sunday anyị Oliseh Storymụaka Akụkọ ọzọ ...